Chete 14,8% yevashandisi ve iPhone ndivo vachatenga iyo iPhone 7 | IPhone nhau
Chete 14,8% yevashandisi ve iPhone ndivo vachatenga iPhone 7
Piper Jaffray muongorori Gene Munster anga achiitisa tsvagurudzo dzakasiyana siyana pamusika pane zvinotarisirwa nevashandisi nekutangwa kweiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Vaviri vaongorori nevatengesi Ivo vari kunetsekana nezve yakaderera hunyanzvi iyo iyo midhiya mitsva ichatipa isu, iyo ichataridzika yakafanana chaizvo neazvino ma iPhone 6s.
Uku kuenderera mune yemhando yapfuura, yakafanana nemakore maviri apfuura, haikurudzire vashandisi kutenga iyi modhi nyowani iyo ichasvika mumwedzi waGunyana. Sekureva kwevamwe vaongorori, kutengesa kwe iPhone kunogona kuwira pamatanho a2014 zvichisimbisa kuti yepamusoro-yekupedzisira smartphone yekutengesa iri kudzikira.
Zvakasarudzika Samsung neGPS S7 uye S7 Edge iri kuratidza zvinopesana, sezvo iri kutengesa zvishandiso zvepamusoro-soro senge zvaive zvisina mumakore matatu apfuura. Asi iyoyo imwe nyaya. Sekureva kwaMunster, kuti aite chidzidzo chake chazvino pazvinotengeswa manhamba, anga achifunga pamaonero evashandisi ve4oo vekuAmerican iPhone. Mumushumo wayo, inotaura kuti chete 14,8% yevashandisi vanoronga kusimudzira chishandiso chavo kune inotevera modhi iyo kambani ichatanga pamusika munaGunyana.
Pakati pevamwe vakapindura, takazviwana izvo 29% vari kufunga kukwidziridza yavo kifaa kune iyo iPhone 7, asi panguva ino haisi yekutanga kwavari. Munster inova nechokwadi chekuti sezuva rekuratidzwa kweiyo iPhone 7 richiswedera, vazhinji vanozove vashandisi vanozochinja pfungwa uye vanozopedzisira vafunga kugadzirisa yavo yazvino kifaa.
Midziyo inoshandiswa nevanhu vanga vari chikamu chechidzidzo ichi irikushandiswa mukati zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvei iPhone 6 kana iPhone 6 Plus pamwe nevakuru mamodheruNepo wechitatu ari kushandisa modhi iyo Cupertino-based kambani yakatangwa gore rapfuura, iyo iPhone 6s uye 6s Plus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Chete 14,8% yevashandisi ve iPhone ndivo vachatenga iPhone 7
Ini pachokwadi handisi kuzotenga, zvinoita kwandiri zvakafanana uye kuti ndiri munhu anonyanyisa_iOS ndakafamba nemhando dzese 3,4,5 na6. Asi sekudonha kuri kwechokwadi zvinoita kwandiri shit vanababa veApple, iwe unofanirwa kuvandudza zvimwe izvozvi mafoni ese anoita kunge akafanana uye nekuwanda neakaipa mabutiro anotengwa nevanhu.
Kugadzirisazve vhiri kupusa uye kumwe kuvandudza kunonetsa. Chokwadi kugadzirisa asi hazvibvise hope dzangu nhasi, kana mangwana futi, hongu
Izvo izvo 14.8 zvinondiudza ndezvekuti vashandisi vanobvumirana neiyo iPhone yavanayo, iyo inoshandura kuita chigadzirwa chakanaka.
Pindura kuna DJGeorge
Zvakajairika kuti gore rino harina shanduko, gore rinouya iyo iPhone inoshandura makore gumi ekuberekwa
Pindura kuna nando
Zvakanaka, pamwe ini handichazoimutsiridza nekuti iMac yangu inodarika makore masere inoda kutsiviwa uye ndinogona kushandisa yangu iPhone 8 kune rimwe gore pasina matambudziko, asi kana dhizaini yacho yakaita semufananidzo wekutanga muchinyorwa, ndinoifarira. Ini handinzwisise kuti vanhu vanonetseka zvakanyanya nezvekunze dhizaini yeiyo iPhone kana iri yakanaka, ine zvinhu zvakawandisa, izvo zvinosanganisira software yekuvandudza, ine iOs 6, uye Hardware. Mazhinji mafoni anoteedzera iko kwazvino dhizaini yeiyo iPhone uye zvinenge zvese kushoropodza kurumbidza dhizaini ... ini ndakanaka kwazvo nezvazvino dhizaini uye kana iwe uchibva kune iPhone 10 kana kumberi, shanduko yakanaka kwazvo. Zviripachena, dai ndaive ne6S ini handingaite chero shanduko.
Nhasi izuva reAmazon Prime Day 2016. Tora mukana weizvi zvinongedzo zvinopihwa kune ako Apple zvishandiso!